China 6 DOF 165kg akwụ ụgwọ Robotic Palletizer Onye nrụpụta na onye na-eweta |Yunhua
Nhazi kọmpat na-enyere usoro ahụ aka itinye n'ime oghere mmepụta gị dị ugbu a, na-enye ohere ntinye na ntinye ọrụ na nkwụsịtụ kacha nta.
Ọ nwere atụmatụ dị ka n'okpuru:
- Ọnụ ego ọrụ dị ala
-elu arụpụtaghị ihe
-Obere mmebi ọnụego
-Emelitere ahụike na nchekwa
Ogologo ogwe aka:2900 mm
Ngwa:Palletizing na Depalletizing
Ngwọta maka palletizing
6 Axis nwere nnukwu ụgwọ ọrụ palletizing Robot
Robot Yooheart na-enye mgbanwe ịmegharị ngwaahịa dị iche iche nke ọma na nke ọma ma na-ebelata ọrụ na njikwa aka.
Nhazi kọmpat na-enyere sistemụ ahụ aka itinye n'ime oghere mmepụta gị dị ugbu a, na-enye ohere nrụnye na inye ọrụ na nkwụsị kacha nta.
HY1165A-290 na-eme ka a mata nkwughachi nke ụkpụrụ pallet ma na-ebelata mmerụ ahụ nke ejiri aka na-ejikọta ya na mmegharị nke palletis ugboro ugboro na onye na-arụ ọrụ ahịrị mmepụta.
Ma ị na-emebi ngwaahịa n'ihu ahịrị gị ma ọ bụ na-agbada ala, Honyen na-enye ahịrị robots zuru oke emebere ma wuo iji wepụta ọrụ dị elu yana oge okirikiri ngwa ngwa.Robots Honyen anọwo na-arụ ọrụ siri ike na nke ọkọlọtọ kemgbe afọ 10.Ma ị na-palletizing a zuru oyi akwa ma ọ bụ onye igbe, akpa, pails ma ọ bụ drum sistem anyị bụ ngwa ngwa, guzosie ike, na a pụrụ ịdabere na.
Sistemụ Robot Palletizing
Multi-arụ ọrụ na Vasatail: Robots palletizing anyị na-abịa n'ụdị dị iche iche na-ebu ibu (oke ụgwọ: 165kg), rute (ogologo ogwe aka ogologo: 3150mm) na ụdị pụrụ iche (4 axis robot na 6 axis robot), na-ahụ na ị ga-ahụ azịza ziri ezi mgbe niile, niile. A haziri interfaces na usoro inye ume ike maka mgbanwe na ọrụ dị iche iche.
Kọmpat na mfe imewe: Kọmpat na nhazi nhazi nke robots palletizing niile na-enyere aka ịbanye ngwa ngwa na ngwa ngwa n'ime usoro ndị dị ugbu a.Nhazi dị mfe na-agbatị oghere ọrụ a na-arụ nke ọma ma na-enye ohere echiche ọdụ ọdụ ọrụ ọhụrụ.
Ndozi kacha nta: Ihe niile dị na rọbọt palletizing nwere ụgbọ oloko na-eyi obere uwe.The elu na siri ike designm na-eme ka nnọọ ogologo mmezi etiti etiti
+ 78º ~ -38º
1. Igbe ahụ bụ ihe ndabere nke ngwa niile dị na RV series reducer.Ọ bụ ngwa dị mkpa nke na-akwado ihe ndị na-emepụta ihe na-edozi ahụ, na-eme ka ọnọdụ ndị ikwu ziri ezi nke ngwa nnyefe na-akwado ibu na-arụ ọrụ na RV reducer.
2. Isi ọrụ nke ikpuru gia bụ ịnyefe mmegharị na ike n'etiti ogwe abụọ na-ejikọta ọnụ, na isi ọrụ nke ibu na ogwe aka bụ ịnyefe ike, rụọ ọrụ ma melite arụmọrụ.
1. USB na-akwado ọrụ: mee ka nnyefe data dị mfe; mmelite usoro ngwa ngwa na njikwa
2. Integrated imewe nke handheld igbe na onye ọbịa, Light arọ na-azọpụta electric kabinet ohere.Jiri mgbawa ọkụ dị elu nke LNC meere onwe ya
3. Back magnetik suction imewe na-eme ka pendant enịm ọ bụla ọnọdụ, na ọ dịghị mkpa ka a support .obere na-eri na adabara.
Robot Yooheart ga-elele akụkụ niile na-abata, yana ihe ziri ezi chọrọ bụ 0.01mm.Naanị ngwa robot ahụ nke na-emezu ihe achọrọ ga-abanye na njikọ na-esote maka nrụnye.
1. Robot na-adịgide adịgide ma nwee ike ịrụ ọrụ na-aga n'ihu ruo awa 24, nke na-eme ka nrụpụta mmepụta dị ukwuu.
2. A na-ezobe moto 5/6 axis na ogwe aka, na-ezere nnyonye anya na-enweghị isi na ntinye na workpieces.
1. Akụrụngwa robot dị mfe na nhazi, dị mfe ilekọta, yana ọnụ ahịa karịa
2. Nnukwu ọsọ na nkwụsi ike, ụzọ ziri ezi, njikwa zuru oke nke ngwọta palletizing dị iche iche
Nnukwu ike servo moto
ISO9001 na asambodo CE
Ezigbo mma na nhazi siri ike
Ọsọ ọsọ maka palletizing
Sistemụ palletizing drum drum
Ụgbọ ala hub stamping na palletizing
Nkata nri Robot palletizing sistemu
Ngwa Palletizing Robot
Usoro ịdị mma arụmọrụ
HY1165A-290 bụ nnukwu ụgwọ ọrụ anyị nke robot axis 6, yana kwa, ụdị ụdị robot nwere nnukwu ibu.Enwere ike iji ihe nlereanya a mee ihe maka palletzing, depalletzing, loading and unloading, na-arụ ọrụ nke ọma na arụmọrụ kwụsiri ike.
Q. Kedu maka ụgwọ ọrụ nke robot Palletzing?
A. Anyị nwere 5, 10, 20kg 50kg, 165kg ụgwọ ọrụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ibu ugwo, anyị nwere ike ịkwa akwa mere.
Ajụjụ. Ekwesịrị m ịhazi njedebe nke ngwa ọrụ ogwe aka n'onwe m?
A. Anyị nwere atụmatụ dum nke robot a, ọ bụghị ezigbo echiche na ị na-akwadebe ndị gripers n'onwe gị, n'ihi na ọ dị mkpa ka ya na robot na-arụkọ ọrụ.
Ajụjụ. Ogologo oge ole ka rọbọt nwere ike ije ozi?
A. Afọ ojiji nke imewe bụ afọ 10.ọ bụrụ na ị nwere ike ịnọgide na-enwe nke ọma ma na-elekọta mgbe niile, ogologo ndụ ọ ga-enwe.
Q. Mgbe oge akwụkwọ ikike gwụchara, ị nwere ike ịnye anyị ọrụ?
A. N'ezie, anyị ga-enyere gị aka.Ma anyị ga-enwe akwụkwọ ntuziaka nke ga-enyere gị aka ịma ka esi ejigide robot.ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ nke anyị, ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ maka akụkụ gị.
Q. Ogologo oge ole ka akwụkwọ ikike ahụ dị?
A. Robot ahụ, anyị nwere ọnwa 18 maka akwụkwọ ikike, akụkụ eletrik bụ akwụkwọ ikike 1 afọ.
Nke gara aga: Robot ịgbado ọkụ akụkụ akpaaka
Osote: ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọnụ ọnụ China kwa ọnwa Azụmahịa ahaziri Hydraulic Press kọlụm anọ 4 Post ntụ ntụ na-akpụ brik brick brick ọkụ brik refractory Material Hydraulic Press Machine
robot palletizing ịwụ
katuunu robot palletizer
Robot ejizi ụlọ ọrụ
palletising robot na-eri
Robot China palletizing
Họrọ ma tinye Robot